🥇 ▷ Hagaajinta iyo astaamaha cusub ee kamaradaha Pixel 4 oo la qaawiyey ✅
Hagaajinta iyo astaamaha cusub ee kamaradaha Pixel 4 oo la qaawiyey
Google ayaa la filayaa inuu soo bandhigo kan cusub Pixel 4 iyo Pixel 4 XL taariikhda qaar wali go’aan lagama gaarin inta lagu jiro bisha Oktoobar. Waxaa la rajeynayaa in Terminaaladan cusub ay sare uqaadi doonaan birta sawir qaadista mobilada sida jiilkii hore ay sameeyeen. Hadda waxaan naqaannay qaar badan oo ka mid ah astaamaha horumarsan iyo La yaab ayey ku tahay in Google ay u diyaariso kaamirada ee mobiladooda cusub.
Mar labaad, waxay ahayd kaameerada Google ee nooca 7.0 oo shaaca ka qaaday astaamaha uu Google hubaal u qaadan doono oo si faahfaahsan u soo bandhigi doono inta lagu jiro soo bandhigida Pixels 4. Google ayaa muujisay sanadkii hore in haysashada megapixels ama dareemayaal dheeri ah aysan qasab ahayn in la mid noqdo oo leh sawirro wanaagsan. Pixel 3 iyo Pixel 3XL waxay kasoo muuqdeen dhinacyo badan oo sawirradooda ah, oo ay kujirto Habeenki Sight Night taas oo wali isku dayaysa in lala jaan qaado tartankeeda.
Hawshani waxay kuu oggolaaneysaa inaad qabsato sawirro dhaqaaq ah oo xasilooni weyn leh halka asalka uu ka soo baxo mugdi. Taasi waa, waxay umuuqataa shaqo si loo sawiro dhacdooyinka isboorti ama muuqaalka ficil. Qaanuunka ‘Google camera code’ shaqadan waxaa loo yaqaan “paneer”.
Kobcinta Habeenkii Hurdada
Hawsha soo saarta iftiinka halka ay umuuqato inaanu jirin wax horumar ah sanadkaan ee Google Pixel 4. Ilo kasoo baxay 9to5Google ayaa shaaca ka qaaday inay noqon doonto mid dhaqso badan oo qurux badan isla markaana ay sidoo kale yeelan doonto qaab cusub, oo horey loo sifeeyay, si loo qabto cirka habeenkii oo leh tayo aad u wanaagsan. Sida muuqata, Google waxay u adeegsan doontaa GPU (Adreno 640 gudaha Qualcomm Snapdragon 855) si dardargelinta kala-goynta cirka oo kor u qaad muuqaalka si loo ogaado xiddigaha oo loo muujiyo natiijada ugu dambeysa.
Wax walba waxay u muuqdaan inay muujinayaan in Pixel 4 ay lahaan doonaan MIT iyo Google HDRNet algorithm, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku darto filter HDR waqtiga dhabta ah taasna waxay kuu oggolaaneysaa dib u soo celinta sawirrada si otomaatig ah Kameradda hore, wararka xanta ah waxay sheeganayaan in Google Pixel 4 ay soo saari doonto shaashad xagal ballaaran oo sidoo kale la jaan qaadi doonta habka HDR.
Soo dhawaansho maqal ah
In kasta oo aysan ahayn wax ku cusub warshadaha, haddana waxaan dooneynaa inaan aragno waxa Google awood u siisay inuu ku sameeyo teknolojiyaddan. Waxay ku saabsan tahay isticmaalidda makarafoonka Pixel 4 ee lagu qabanayo maqalka aag gaar ah oo ahmiyada la saarayo markay weyneyso. IPhone 11 ama LG ama aaladaha HTC waxay shaqadan hayeen sanado. Koodh kaameradda Google si cad ayaa loogu muujiyey a “Soo dhawaanshaha Soo Dhaweynta Audio”
Xannibaad wakhti kasta
Waxaan ognahay in Android 10 uu leeyahay taageero DDF (Dynamic Depth Fortmat), nidaam file cusub oo kaydiya xogta qoto dheer ee sawir. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalaha inuu la ciyaar asalka waqti kasta oo khafiifi sawirada “wadan ahaan” adigoon u tagin codsiyada dhinac saddexaad. Sidan ayaa muuqaalku had iyo jeer u ilaalin doonaa tayadiisa asalka ahayd.
Hawlaha kale ee “qarsoon”
Waxaan hubnaa in Google ay dhowr kaararka gacanta ku hayso, laakiin waxaa suuragal ah in arrinta la yaabka leh ee inbadan oo ka mid ahi ay ku baabba’een daadadkan. Kaameerada Google ayaa sidoo kale soo saartay muuqaal oo magacoodu uu yahay “McFly” iyo kii ay matalaysay astaan ​​dib u laabasho. Hawsheeda wali waa mid qarsoon. “Rocky” waa magac kale oo magaceed ah oo ka soo muuqday koodhka app-ka oo aan wali la duubin.
In kasta oo heerka daadashada Google Pixel 4 uu ahaa mid aad u dagaal badan, haddana waxaan rajeyneyaa in Google badbaadin doonto waxoogaa la yaab leh maalinta soo bandhigidda labada aaladaha. Shirkadda weli ma cayimin taariikhda gaarka ah, in kasta oo aan rajeynayno in aan aragno inta lagu jiro bisha Oktoobar.